GT ကို Messenger ကို Recovery ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » GT ကို Messenger ကို Recovery ကို
GT ကို Messenger ကို Recovery ကို APK ကို
(GT ကို Messenger ကို Recovery ကိုသာအမြစ်တွယ် devices များအဘို့ဖြစ်၏!) အစဉ်အဆက်မတော်တဆ Messenger ကိုချက်တင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပြီး? ဒီ app ကိုသင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာ Facebook မှာ Messenger ကိုအပေါငျးတို့သပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ချက်တင်မက်ဆေ့ခ်ျများပြန်လည်နာလန်ထူရန်ကြိုးစားသည်။ မဆိုကြိုတင် backup လုပ်ထားမရှိ PC ကို needed.Disclaimer မရှိရင်: ကြောင့်အများအပြားစစ်ဆင်ရေးစနစ်များ, ကိရိယာအမျိုးအစားများနှင့်ဖျက်မှု၏အချိန်, ဒီ app ကိုသင်၏ချတ်မက်ဆေ့ခ်ျများပြန်လည်နာလန်ထူအာမခံလို့မရပါဘူး။
သငျသညျဒေတာပိုအမျိုးအစားများကို recover ဖို့လိုအပ်ပါက, GT ကို Recovery ကိုကြိုးစားပြီး!
ကျနော်တို့ကအမြဲပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုအောင်နည်းလမ်းတွေထဲကစကားကိုနားထောငျဖို့ရှာကြသည်, သင်ဆော့ဖ်ဝဲအကြောင်းကိုမဆိုအကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုရှိပါက, ငါတို့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းနှင့်ကူညီပေးဖို့ဒီမှာပါ!
အချို့သောအရေးကြီးသော bug တွေ 1.Fixed
GT ကို Messenger ကို Recovery ကို
2.95 ကို MB
Ltd. , ဟန်ကျိုး KuaiYi နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Ravi ကို Shaw says:
သြဂုတ်လ 9, 2019 မှာ 8: 00 နံနက်
မရပွင့်လင်း app ကို